एसिया कप क्रिकेटःश्रीलंकाविरुद्ध बंगलादेशको शानदार जित
भदौ ३१ गत्ते । एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत उद्घाटन खेलमा समूह बी मा रहेको बंगलादेशले श्रीलंकाविरुद्ध १३७ रनको शानदार जित आत्मसाथ गरेको छ । दुवईको सारजाँह क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले ४९.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै २६१ रन बनाएको
एसिया कप आजबाट, कुन टिम कस्तो ?
काठमाडौं ,३० भदौ। एसिया कप क्रिकेट भोलिदेखि युएईमा सुरु हँुदैछ । असोज १२ गतेसम्म आयोजना हुने एसिया कप विश्वकपपछि दोस्रो सर्वाधिक रुचाइएको प्रतियोगिता हो । ६ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने यो प्रतियोगितामा कुन टिम कस्तो छ ? पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने
साफ च्याम्पियनसिपः चौथोपटक पनि नेपाल सेमिफाइनलमै रोकियो
ढाका — नेपाल साफ च्याम्पियनसिप २०१८ को फाइनल प्रवेश गर्न असफल भएको छ । ढाकास्थित बंगबन्धु रंगशालामा बुधबार अपरान्ह नेपाल र माल्दिभ्सबीच भएको खेलमा माल्दिभ्सले नेपाललाई ३(० ले हरायो । माल्दिभ्स फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बुधबारको खेलमा माल्दिभ्सले खेलको नवौं
जनकपुरमा क्रिकेट क्रेज बढदै, चन्दा मागेर क्रिकेट अभ्यास, राष्ट्रिय टोलिमा स्थान खोज्नु नै चुनौति
भदौ १२ गत्ते,जनकपुरधाम। कभर्ड हल संगै रहेको चिया पसलमा भेटिने १० वर्षीया विनिता कुमारी पछिल्लो समय क्रिकेट अभ्यासमा भेटछिन् । कक्षा २ मा अध्ययनरत बिनिताको उद्येश्य नेपालबाट अन्र्तराष्ट्रिय खेलमा सहभागि हुने छ । जनकपुरको कभर्डहल मैदानमा बिहानि सत्रमा २०÷२५ जना खेलाडीमा
एसियाली खेलकुद स् ६ खेलको तयारी विदेशमा, थप २ टिम जाने तयारीमा
साउन ८ गते, काठमाडौं । आगामी भदौ २ देखि इन्डोनेसियामा हुने १८औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालले २८ खेलमा भाग लिँदैछ। प्रतियोगिताको तयारीका लागि सबै खेलको तयारी विभिन्न स्थानमा भइरहेका छन्। अधिकांस खेलको तयारी स्वदेशमा भए पनि ६ खेलको तयारी भने विदेशमा भइरहेको
सितारियो कराँतेको प्रदेश स्तरीय दिक्षान्त समारोह सुरु
साउन ७ गते , २०७५ जनकपुरधाम । प्रदेश २ स्तरीय सितारीयो कराँतेको दिक्षान्त समारोह जनकपुरधाममा सुरु भएको छ । ५ दिनसम्म चल्ने सो दिक्षान्त समारोहको उद्घाटन सोमबार गरिएको छ । दिक्षान्त समारोहमा प्रदेश २ का आठ वटै जिल्ला तथा सिन्धुली र
फ्रान्स दोस्रो पटक विश्व च्याम्पियन, क्रोएसियाको सपना अधुरै
असार ३२ गत्ते । फ्रान्सले दोस्रो पटक विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। आइतबार भएको २०१८ फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा क्रोएसियालाई ४(२ गोलले पराजित गर्दै फ्रान्सले २० वर्षपछि दोस्रो उपाधि जितेको हो। यसअघि फ्रान्सले सन् १९९८ मा पहिलो पटक उपाधि
असार २९ गत्ते, काठमाडौं । क्रोएसिया र फ्रान्सबीचको विश्वकप फाइनल खेल अर्जे्न्टिनाका रेफ्रीले खेलाउने भएका छन् । रसिया र साउदी अरबबीचको उद्घाटन खेल खेलाएका अर्जे्न्टिनाका रेफ्री नेस्टोर पिटानाले नै फाइनल खेले खेलाउने भएका छन् । फिफाले नेस्टोर पिटानालाई फाइनल खेल खेलाउने जिम्मा
असाढ २८ गत्ते, काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पैसा र विदेश भ्रमणमा जानका लागि मात्र खोलिएका संघलाई धमाधम खारेज गर्न थालेको छ। परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले नियमित नविकरण नगर्ने, खेलकुद गतिविधि शून्य भएका संघहरुको दर्ता खारेज गर्न सुरु गरेका हुन् । यसै
काभानीको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा उरुग्वे क्वार्टरफाइनलमा, रोनाल्डोको विश्वकप जित्ने सपना टुट्यो
असार १७ गत्ते,काठमाडौं । इडिन्सन काभानी नायक बनेपछि विश्वकपको प्रिक्वार्टरफाइनल खेलमा दक्षिण अमेरिकी महारथी उरुग्वेले युरो च्याम्पियन पोर्चुगललाई २–१ गोलले पराजित गरेको छ । क्वार्टरफाइनलमा उरुग्वेको भेट फ्रान्ससँग हुनेछ । अर्जे्न्टिनालाई ४–३ गोलले हराउँदै फ्रान्स यसअघि नै क्वार्टरफाइनलमा पुगिसकेको छ । फ्रान्सेली क्लब
विश्वविजेता जर्मनी विश्वकपबाट बाहिरियो, ब्राजिल र स्विट्जरल्याण्ड विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश
असार १४ गत्ते । साविकको विश्वविजेता जर्मनी विश्वकपबाट बाहिरिएको छ । समूह एफमा रहेको जर्मनी दक्षिण कोरियासँग २–० ले पराजित भएसँगै विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो । कोरियाको जीतमा दुबै गोल इन्जुरी समयमा भएको थियो । कोरियाका लागि ९२ औं मिनेटमा किम
विश्वकपमा आज पनि ४ खेल, जर्मनी र ब्राजिललाई समेत एलिमिनेसनको खतरा !
असार १३गत्ते, काठमाडौं । रुसमा जारी फिफा विश्वकप फूटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज दुई समूहका ४ खेल हुँदैछन् । ’समूह एफ’का दुवै खेल बेलुका पौने ८ बजे र ’समूह ई’का खेलहरू राति पौने १२ बजे हुनेछन् । बेलुकाको खेलमा जर्मनीले दक्षिण कोरिया र मेक्सिकोले
असार ५ गत्ते । विश्वकप समूह ‘एच’ को पहिलो खेलमा मंगलबार बेलुका पौने ६ बजे जापान र कोलम्बियाबीच खेल हुँदैछ । कोलम्बिया चार वर्षअघि ब्राजिलमा भएको विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा पुगेको टिम हो । यसपटक पनि त्यो सामर्थ्य र लय कोलम्बियन टिम देखिन्छ । जेम्स
असार ५ गत्ते । विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा इंग्ल्याण्डले ट्युनिसियालाई २–१ ले हरायो । पहिलो हाफमा १–१ गोलको बराबरीमा रोकिएको इंग्ल्याण्डका लागि ह्यारी केनले उद्धार गरे । कप्तान ह्यारी केनले दुई गोल गर्दै इंग्ल्याण्डलाई ट्युनिसियाविरुद्ध जित निकालेका हुन् । ११औं
४० वर्षपछि ब्राजिल पहिलो खेलमै बराबरीमा रोकियो
असार ४ गत्ते । विश्वकपको दाबेदार मानिएको ब्राजिल रसिया विश्वकपको पहिलो खेलमा स्वीट्जरल्याण्डसँग बराबरीमा रोकिएको छ । प्रत्यक विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदै आएको ब्राजिल स्वीट्जरल्याण्डसँग बराबरीमा रोकिएको हो । आइतबार मध्यराति रसियाको रोस्तोभ एरिनामा भएको खेलमा ब्राजिलले स्वीजरल्याण्डसँग एक–एक गोलको बराबरी खेलेको छ
विश्वकपमा आज तीन खेलः कुन — कुन टिमको भिडन्त हुने ?
असार ४ गत्ते,काठमाडों । रुसमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज तीन खेल हुने भएको छ । आज हुने पहिलो खेलमा स्वीडेन र दक्षिण कोरियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । समूह एफमा रहेको युरोपियन राष्ट्र स्वीडेन र एसियाली राष्ट्र दक्षिण कोरियाबीचको खेल नोवगोरोड़ स्टेडियममा नेपाली
जेठ ३१ गत्ते, काठमाडौं । विश्व फुटबलको महाकुम्भ बिहीबार रसियाको मस्कोमा सुरु हुँदैछ। विश्वकप फुटबलको २१औं संस्करणमा ३२ देश सहभागी छन्। सहभागी देशले लिग कम नकआउटका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सहभागी टोलीलाई ८ समूहमा विभाजन गरिएको छ। एक महिना (जुलाई १५ सम्म) चल्ने
विश्वकप अघिको अन्तिम खेलमा बेल्जियमको सहज जित
जेठ २९ गत्ते , काठमाण्डौं । विश्वकपअघिको अन्तिम मैत्रीपूर्ण खेलमा बेल्जियमले दक्षिण अमेरिकी टोली कोष्टारिकालाई ४–१ गोलले हराएको छ । राजधानी ब्रसेल्समा खेलाइएको खेलमा घरेलु टोली २४औं मिनेटमा १–० ले पछि परेको थियो । कोष्टारिकाका लागि ब्रायन रुइसले गोल गरेका थिए ।
विश्वकप नजिकिँदा ब्राजिलमा बिजुलीको चिन्ता
जेठ २८ गत्ते , रियो दी जेनेरियो । विश्वकप फुटबल सुरु हुन अब तीन दिन मात्र बाँकी छ । जुन १४ देखि रुसमा सुरु हुने २१औं संस्करणको विश्वकप फुटबलको उपाधि कसले जित्ला भन्ने चर्चा भइरहेका बेला पाँच पटकको विजेता ब्राजिल सरकार
जेठ २५ गत्ते । मास्टर ब्लास्टर सचिन तेन्दुलकारका छोरा अर्जुन तेन्दुलकर भारतको १९ वर्षमुनिको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा छनोट भएका छन्। आगामी जुलाईमा श्रीलंकाविरुद्ध हुने २ वटा ४ दिवसीय खेलका लागि अर्जुन राष्ट्रिय टोलीमा परेका हुन्। विश्व क्रिकेटमा सचिनको अग्लो छविका अघि अर्जुनको